Niha-natavy tamin’ny vakansy…andao ahintsana!
Produit de la Rédac
Manamafy sady mandrafitra ny fe ao an-trano
Hikolo sy hanamafy ny fe indray isika anio. Tsy mila fitaovana fa ny lanjan’ny vatana na ny “poids du corps” no ampiasaina amin’ity indray mitoraka ity.
Vehivavy bevohoka, afaka mikolo vatana koa
Mahazo manao fampihetseham-batana ny vehivavy mitondra vohoka. Ireto fampihetseham-batana atoro anao ireto dia azo atao manomboka eo amin’ny faha 6 volan’ny kibo.
Mikolo ny fitombenana sy ny kibo miaraka
Ndao indray hikolo ny fitombenana sy ny kibo, amin’ny fomba hafa. Mba hampandaitra tsara ny fampihetseham-batana atao amin’ny vatana dia tsara ovaovaina matetika ny karazana fampihetseham-batana atao.
Mampiasa “baton”, hanafisahana kibo
Tsy voatery atao mitsilany ny fanalana ny kibo. Azo atao tsara ny manala izany amin’ny fampihetseham-batana atao mitsangana ka ampiasana “baton” izany amin’ity indray mitoraka ity
Manala tavy ao an-damosina sy ny foto-tsandry
Rehefa handrafitra ny vatana dia tsy tokony atao ambanin-javatra ny fikoloana ny tapany ambony amin’ny vatana indrindra ny ao an-damosina sy ny eo amin’ny foto-tsandry.
Manintsana tavy amin’ny alalan’ny fanaovana cardio
Mba hanintsanana ny lanja azo tamin’ireny fety nisesisesy ireny sy hisorohana ny fitomboan-danja amin’ireo fifampiarahabana noho ny fahatrarana ny taom-baovao mbola ho avy dia azonao atao tsara ireto fampihetseham-batana ireto satria manintsana ny tavy izy ireo raha atao matetika.
Mandrafitra ny fitombenana ho boribory tsara
Na dia vanim-potoana fety aza izao dia aza adinoina ny mampihetsi-batana. Sady mandrafitra ny bika rahateo izy ireo no handany kaloria koa.
Raha tsapanao fa nahazo aina taorian’ireny fialan-sasatra ireny ka maniry hanintsana izany dia azonao atao tsara ny manao ireto fampihetseham-batana ireto na dia ao an-trano fotsiny aza :
Fampihetseham-batana 1 (sary 1 – 2)
Mijoro manoloana tohatra na ankalana avoavo iray dia mitsambikina mifandimby eo amboniny ny tongotra. Tsara raha mitazona “haltère” na “tavoahangin-drano kely iray isaky ny tanana. Manafaingana ny vokatra azo mantsy izany. Averina in-30 isaky ny lafy. Manao andiany 3
Fampihetseham-batana 2 (sary 3 – 4 – 5 )
Tsy maintsy ankalana mihitsy kosa no ampiasaina ho an’ ity faharoa ity satria isabakana indraindray ilay ankalana eto. Mitazona ihany “haltère” iray isaky ny tanana. Mijoro misabaka amin’ilay ankalana dia aforitra ny lohalika roa, hakàna bahana dia mitsambikina miakatra eo ambonin’ilay ankalana indray avy eo. Miverina amin’ny paozy niaingana avy eo. Averina in-30 izay fihetsika rehetra izay. Manao andiany 3 ihany.
Fampihetseham-batana 3 (sary 6-7)
Mitazona “’haltère” iray isaky ny tanana hatrany eto. Mijoro amin’ny an-daniny iray amin’ilay ankalana dia akarina eo ambonin’ilay ankalana ny tongotra manakaiky ilay ankalana. Mitsambikina dia ny tongotra ilany indray no apetraka eo ambonin’ilay ankalana, ny iray apetraka amin’ny tany. Ireo fihetsika ireo no averina in-30, hatao haingana sady mitsambikina isaky ny manova tongotra. Manao andiany telo hatrany.
Torohevitra fanampiny :
Mihazakazaka 15 minitra na manao dihim-bazaha 15 minitra mialohan’ ny hanombohana ireo fampihetseham-batana ireo mba hafana tsara ny hozatra.
Aza adinoina ny misotro rano mialoha na eny anelanelan’ny fanaovana fampihetseham-batana. Hahatsemboka be mantsy ireo fampihetseham-batana ireo.
Somary mitandrina sakafo rehefa manintsana toy izao mba hahita vokatra haingana. Asiana legioma sy voankazo ny sakafo telo lehibe.
Isaorana i coach Josy avy ao amin’ny Art Sport Fitness Andrefan’Ambohijanahary nanolotra ny fampihetseham-batana anio. Fifandraisana : 0340399035
Copyright 2009 Jejoo